> Resource > Hard Drive > Sidee inuu ka soo kabsado Xogta laga External Hard Disk laguma ogaan karo
Waxaan soo kaban karto, Data Haddii Hard Disk waxaa aan la baarin?
Waxaan leeyahay drive a Western Digital dibadda adag in aan la ogaan Windows dambe. Markii aan u furaysto in, drive adag ma muujiyaan aan kor ku saabsan "My Computer" laakiin waxa la muujiyaa ilaa digsi. Waan ogahay jiraan wax qalad ah la ii disk adag. Ha Laakiin waxaan u baahan tahay xog ku drive in ay adag tahay. Ayaan waxan u samayn karaa?
Waa hagaag, aad drive weli waxaa laga garan karaa your computer. Laakiin marka aad isku dayaan in ay helaan, farriimo baadi qaar ka mid ah sida "drive ma laga heli karaa", "drive ma formatted" ama "drive ceeriin aan initialized" la dhisay dabamariyay doonaa ilaa aad shaashadda. Sababta sababta khaladka ka dhaca waxay noqon karaan kuwo kala duwan, oo mid ka mid ah kuwa ugu badan waa in ay jirto qaybta qaldan ku wadid aad u adag ama MBR aad drive kharribmay.
Sidaas, sida inuu ka soo kabsado xogta ka disk adag dibadda aan ogaado? Waxaa hubaal ah haddii wadid aad u adag waxaa laga garan karaa your computer, In kastoo aan la ogaan karaa ama heli. Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac dhow yahay habka ugu fiican ee aad ka bogsato haddii xogta disk adag aan la ogaan. Waxaad isticmaali kartaa inuu ka soo kabsado ku dhowaad dhammaan noocyada kala duwan ee files lumay maqaal qoruhu disk adag ee aad si fudud, oo ay ku jiraan sawirrada, files audio, videos, document files, iwm
Download version tijaabo ah Wondershare Data Recovery inuu ka soo kabsado xogta ka disk adag hadda aan la ogaado!
3 Talaabada inuu ka soo kabsado Xogta laga External Hard Disk laguma ogaan karo
Hadda aynu ku sameeyo dib u soo kabashada la Windows version of Wondershare Data Recovery. Users Mac raaci karaan howlgalka la mid ah si loo farsameeyo soo kabashada.
Tallaabada 1 hab kabashada Select inuu ka soo kabsado xogta laga gaari ku adag oo aan la ogaado
Kadib markii ay Wondershare Data Recovery on your computer, waxaad ka arki kartaa barnaamijka sida image hoose.
Ha Halkan ayaa dooran "Recovery ah Barzakh," mode inuu ku soo bilowdo.
Tallaabada 2 baarista drive dibadda adag tahay in la raadiyo qoruhu ku yaal
Hadda waxaad u baahan tahay in ay doortaan wadid aad u adag oo ka dhacay on "Next" badhanka si ay u baadhaan qoruhu ku yaal.
Halkan dhan qoruhu aad drive dibadda adag lagu soo bandhigi doonaa, oo kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan Risaalo in aad ku saabsan inuu ka soo kabsado xogta ka oo guji "Start" in iskaan xogta waxa ku jira.
Tallaabada 3 Ladnaansho Data ka Hard Disk aan ogaado
Marka scan ay ka badan tahay, dhammaan xogta recoverable la soo daabici doonaa suuqa kala barnaamijka. Waxaad ka eegi kartaa sida badan ee aad files lumay la soo kabsaday karo by arkaysid magacyada file.
Markaas kaliya aad u baahan tahay si ay u xusaan files aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" badhanka si ay u badbaadin on your computer.
Maxaa Haddii External Drive aan la aqoonsan karo ama la ogaado ...?
Sababaha suuragal ah in arrintan uu noqon karaa mid waxyeello jireed, darawalka dhacsan Windows, qaybaha xun, iwm Haddii isku dayaya computer kale ma xallin karo dhibaatadan, heer sare ah oo aad soo jeediyay in loo diro aad drive in a adeegyada dayactirka qalabka.
Habka ugu wanaagsan lacag la'aan ah iyo inuu ka soo kabsado xogta ka HDD drive adag